I-Asus ZenFone Max Pro M1, uluhlu olutsha lwezoqoqosho oluphakathi kweTaiwanese | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isigebenga saseTaiwan u-Asus, usizisela I-Asus ZenFone Max Pro M1, ifowuni enexabiso eliphantsi eneenkcukacha kunye neempawu ezihlengahlengisiweyo kubaphulaphuli beemfuno eziphakathi kodwa ndinxanelwe isiphelo sendlela elungileyo.
Phakathi kweempawu ezibalaseleyo kule fowuni, Sifumene inkqubo yokusebenza ye-Android ngaphandle kwendlela efanelekileyo yokwenza ngokokuhambelana nenkampani esihamba nayo. Siyakwandisa!
I-Asus ZenFone Max Pro M1 iza ixhotywe ngescreen se-IPS LCD ye-5.99-intshi ene-FullHD + isisombululo seepixels ezingama-2.160 x 1.080. Ngaphantsi kwesele sele saziwa kakuhle kwaye sixatyisiwe i-18: umlinganiso we-9 kunye ne-2.5D yeglasi egobileyo yokuzibamba ngakumbi. Ngaphakathi, sifumana i-chip-core ye-Qualcomm Snapdragon 636 chip (8x Kyro-260 1.8GHz) ene-64bits yoyilo kunye ne-14nm ekhatshwa yi-3 / 4GB ye-RAM, 32 / 64GB yendawo yokugcina yangaphakathi eyandiswa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kumthamo we-2TB, kunye ibhetri enkulu ye-5.000mAh ene-2A / 10W yokutshaja ngokukhawuleza.
Kwicandelo lokufota, Iselfowuni ixhotywe nge-13MP + 5MP shooter yangasemva ene-2.2 ° f / 80 yokugxila kugxilwe nge-PDAF kugxilwe kunye ne-Flash ye-LED. Ngaphambili, ine-8-megapixel sensor ene-f / 2.0 ukuvula kunye ne-soft-tone LED Flash.
Ngokumalunga nezinye izinto, le fowuni iqhuba i-Android 8.1 Oreo kwinguqu yayo emsulwa, inyusa isifundi somnwe ngasemva, inenkxaso ye-SIM emibini, kwaye idibanisa itekhnoloji yobuso yobuso ukuvula isixhobo. Yintoni egqithisile, Imilinganiselo ye-159 x 76 x 8.61 yeemilimitha kunye nobunzima be-180 yeegram.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-Asus ZenFone Max Pro M1
Okwangoku I-Asus ZenFone Max Pro M1 iya kufumaneka kuphela kwimakethi yaseIndiya ukusukela kule Meyi 3 izayo ngombala I-Deepsea emnyama (mnyama) kunye Meteor Isilivere (isilivere).
Imodeli ye-3GB ye-RAM enememori yangaphakathi ye-32GB iya kuxabisa i-Rs 10.999, eyi-135 euros ngokutshintshiselana, ngelixa ukwahluka kwe-4GB ye-RAM ene-64GB yeROM kuya kuxabisa i-Rs 12.999, elingana nexabiso le-Rs.ngee-160 zeerandi.
Inkampani ikwabhengeze imodeli ye-6GB ye-RAM ene-64GB ROM. Nge-16MP + 5MP ezimbini zangasemva zekhamera kunye ne-16-megapixel front shooter. Oku kuyakuxabisa i-14.999 rupees (i-185 yee-euros).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UAsus ZenFone Max Pro M1, udidi olutsha lwezoqoqosho oluphakathi kweTaiwan